माइती नेपालद्वारा १२८ जनाको उद्धार
प्रस, वीरगंज, १६ पुस/ माइती नेपाल वीरगंजले गत वर्ष २०१४ जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्मको तुलनामा यस वर्ष चेलीबेटीको ओसारपसार तथा महिला हिंसाका घटनाहरूमा कमी आएको जानकारी गराएको छ । माइती नेपालकी प्रमुख स·ीता पुरीले बिहीवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी गत वर्ष १३८ जना महिला तथा बालबालिकालाई सीमा क्षेत्रबाट उद्धार गरेकोमा यस वर्ष २०१५ जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म १२८ जना बालबालिका तथा महिलाहरूको सीमा क्षेत्रबाट उद्धार गरिएको बताइन् । गत वर्ष १३८ जनालाई ठोरी र वीरगंज नाकाबाट उद्धार गरिएको उनको भनाइ थियो । गत वर्ष ८८ जना बालबालिका तथा महिला हराएको निवेदन परेको थियो भने यस वर्ष ३० वटा निवेदन परेको र सोमध्ये १४ जना महिला तथा बालबालिकालाई उद्धार गरी परिवारजनको जिम्मा लगाएको पुरीले बताइन् । विगतको तुलनामा यस वर्ष महिला बेचबिखनको मुद्दा दर्ता पनि तुलनात्मक हिसाबले कम रहेको उनले बताइन् । गत वर्ष ३ वटा महिला तथा बालबालिका बेचबिखन मुद्दा, ४ वटा जबरजस्ती करणी मुद्दा दर्ता भएकोमा यस वर्ष महिला तथा बालबालिका बेचबिखन मुद्दा १, जबरजस्ती करणी मुद्दा २ वटा दर्ता भएको सो कार्यालयले जनाएको छ । हराएका ३
आन्दोलनकारी र तस्करबीच पुन: झडप
प्रस, वीरगंज, १६ पुस/ मितेरीपुलमा धर्नामा बसेका आन्दोलनकारी र तस्करबीच गएराति पुन: झडप भएको छ । झडपमा परी मोर्चातर्फ ५ जना र तस्करतर्फ ३ जना घाइते भएका छन् । मोर्चाका कार्यकर्ताहरू नाउक्षेमा उपचारपछि घर फर्किएका छन् । बारा सिसहनियाका बृजकिशबोर पटेलको अवस्था गम्भीर रहेको अस्पतालले जनाएको छ । घाइते हुनेहरूमा अमर यादव, जयप्रकाश साहलगायत रहेका गठबन्धनका नेता शिव पटेलले जानकारी गराए । राति ८ बजे ८/१० वटा मोटरसाइकलमा अवैध कपडालगायत अन्य सामान भित्र्याउने क्रममा आन्दोलनकारी र तस्करबीच झडप भएको थियो । अहिरवाटोला तथा पशुपतिनगरबाट आएका तस्करहरूभन्दा धर्नामा बसेका आन्दोलनकारीहरूको सङ्ख्या बढी भएको कारण तस्करहरूले कुटाइ खाएका थिए । अन्य दिनको तुलनामा गएराति पर्सा र बाराका विभिन्न गाउँबाट टयाक्टरमा आएका मोर्चाका कार्यकर्ताहरू धर्नामा बसेका मोर्चाका नेता प्रदीप यादवले बताए । एक घण्टासम्म जारी झडपको क्रममा नेपालतर्फको सशस्त्र र जनपद प्रहरी तथा भारतीय एसएसबी मूकदर्शक बनेको थियो । सिटीराइड सञ्चालक र आन्दोलनकारीबीच झडप सङ्घीय समावेशी मधेसी गठबन्धन तथा सिटीराइड बस व्यवसायीबीच घण्टाघरमा बि
अमेरिका: आविष्कारको भूमि
विश्वराज अधिकारी संयुक्त राज्य अमेरिका जहाँ प्रत्येक पल नयाँ नयाँ वस्तु एवं सेवाहरूको विकासबारे सोचिन्छ, नयाँ वस्तु एवं सेवाहरूको विकास गरिन्छ र नयाँ वस्तु एवं सेवाहरूको विकास गरेर उपभोक्ताहरूलाई अधिक सेवा तथा सन्तुष्टि प्रदान गरिन्छ । यसैगरी व्यापारका नयाँ नयाँ तरिकाहरूको विकास गरिन्छ । नयाँ नयाँ वस्तु एवं सेवाहरू उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा नै अमेरिकामा फेसबूक, युट्युब, स्काइप, गूगल, अमेजन, इबे, ट्वीटर, उबर आदिको विकास भएको हो । यी सुविधाहरूको विकासले उपभोक्ताहरूलाई प्रदान गर्ने सुविधाहरूको विस्तार मात्र भएन, व्यक्तिहरूको जीवनशैलीमा नै परिवर्तन आयो । रोजगारका अनेक अवसरहरू सृजना भए । संसारको कुनै एक कुनामा भएको घटना केही मिनेटभित्रमा नै संसारभरिका व्यक्तिहरूलाई अवगत गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा युट्युबको विकास हुनुभन्दा पहिले कसैले सोचेको पनि थिएन । अहिले सिरियामा सरकारी सेना वा इस्लामिक उग्रवादी स·ठनले सामान्य नागरिकमाथि गरेको बम हमला होस् वा नाइजेरियाको अर्काे इस्लामिक उग्रवादी स·ठन बोको हरामले गरेको हिंसक कारबाई, केही मिनेटभित्रमा नै संसारभरि युट्युबमा हेर्न सकिन्छ । युट्युबले सञ्
लोडसेडिङमुक्त नेपालको सपना
श्रीमन्नारायण नेपालमा कुनै पनि पार्टीको अथवा नयाँ व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकारको गठन हुँदा देशका जनताले पाउने पहिलो घोषणा अथवा उपहार भनेको लोडसेडिङमुक्त नेपालको सपना हो । नेपाली जनताको निम्ति लोडसेडिङमुक्त नेपालको सपना “आकाशको फल आँखा तरी मर” साबित हुँदै आएको छ । यस सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्न दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ । नारा तथा घोषणाबाट मात्रै यो सम्भव हुने भए दक्षिण एसियाका प्राय: सबैजसो देशमा नेपालबाट उत्पादित विद्युत् नै अहिले खपत भइरहेको हुने थियो र हामी सौभाग्यमानी नेपाली जनता सम्भवत: यस क्षेत्रका सर्वाधिक सुविधासम्पन्न एवं धनी नागरिक कहलिने थियौं । हास्यविनोदले भरिएको आफ्नो भाषणका निम्ति चर्चित नेकपा एमालेका वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वर्तमान अवस्थामा देशको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । दोहोरो जिम्मेवारीमा भएका कारण उनले अब व्यङ्ग्य तथा आक्षेपपूर्ण भाषणमात्रै होइन, आफूले बोलेका अथवा घोषणा गरेका कुरालाई कार्यान्वयन गरेर देखाउने अवसर तथा जिम्मेवारी पनि पाएका छन् । अब उहाँ देशको प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभएको छ । तसर्थ अब उहाँले भाषण होइन, काम गरेर देखाउने बेला आएको छ । एक वर्
चेतना जागरणको खाँचो
पुस १५ देखि माघ १५ गतेसम्मको अवधि तराई–मधेसको लागि सबैभन्दा जाडो समय हो । यो एक महिनाको अवधिलाई जाडोयामको मध्याह्न मानिन्छ । यस वर्ष पनि जाडोयामको मध्याह्न शुरू भइसकेको छ । यद्यपि बितेका वर्षहरूमा जस्तो हुस्सु, कुहिरो तथा चिसो सिंरेटो भने यस वर्ष भएको छैन । मौसमविद्हरूले पनि यस वर्ष बाक्लो कुहिरो लाग्ने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । तर पनि मौसम हो, यसको कुनै भरोसा हुँदैन । नसोचेको र अकल्पनीय किसिमले परिवर्तन हुने चिजको पर्यायवाची मौसम हो । मौसमसम्बन्धी कैयन भविष्यवाणीहरू उल्टा भएका उदाहरणहरू छन् । यसर्थ जाडोको खतरा ‘यस वर्ष यतिकै टर्छ’ भनेर हेलचक्रयाइँ गर्ने अवस्था भने छैन । अहिलेको अवस्थामा पनि अस्वस्थ्य, विपन्न, बालक, वृद्धवृद्धा र सावधानी अपनाउन नसक्नेहरूका लागि त ज्यान लिन सक्ने चिसो भइसकेको छ । केही दिन पहिले कलैयामा एक किशोरीको कठ्याङ्ग्रिएर ज्यान गयो । बिहानै नुहाएकी किशोरीले समयमा तातो कपडा नपहिरिंदा चिसोले ज्यान लिएको हो । त्यसैगरी सर्लाहीमा एक वृद्धको दम फुलेर मृत्यु भयो । राति सुतेका वृद्धको बिहान प्राण गइसकेको थियो । उनको साथमा तातो ओड्ने, तातो पानी वा स्प्रे पनि थि
बारा उद्योग वाणिज्य सङ्घ जीतपुरका पदाधिकारीहरूको शपथ ग्रहण, समग्र विकासको लागि औद्योगिक विकास जरुरी – प्रदीप केडिया
प्रस, जीतपुर, १५ पुस/ मुलुकको समग्र विकासको लागि आर्थिक विकास अति आवश्यक छ भने आर्थिक विकासको लागि औद्योगिक विकास जरुरी छ । यस भेगको समग्र विकासको लागि वीरगंज, गण्डक–सिमरा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्न अहिलेको आवश्यकता हो र सोको लागि यस भेगका सम्पूर्ण जनसमुदाय, व्यवसायी, जनप्रतिनिधिहरूले सरकारलाई दबाब दिन अहिलेको जल्दोबल्दो आवश्यकता भएको वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घ वीरगंजका अध्यक्ष प्रदीप केडियाले एक समारोहबीच जीतपुरमा बताए । बारा उद्योग वाणिज्य सङ्घ जीतपुरका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको आसनबाट अध्यक्ष केडियाले सो कुरा बताएका हुन् । बारा उद्योग वाणिज्य सङ्घ जीतपुर शाखाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष घनश्याम गिरीलाई बारा उद्योग वाणिज्य सङ्घ कलैयाका उपाध्यक्ष कपिलदेवप्रसाद यादवले र अध्यक्ष गिरीले पदाधिकारीहरू उपाध्यक्ष रामबाबूप्रसाद कलवार, सचिव अमर यादव, कोषाध्यक्ष मनोजकुमार गुप्ता, सदस्यहरू बलिराम साह, रामबाबुू कलवार, विनोदप्रसाद जैसवाल, मोहन साह कलवार, विजयकुमार गुप्ता, हारुन अन्सारी, विनोद साह तेली, अनिलकुमार साह, र श्यामबाबू साहलाई गोपनीयता तथा का
विशाल लाठी जुलुस प्रदर्शन
प्रस, वीरगंज, १५ पुस/ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आह्वानमा आज लाठी जुलुस प्रदर्शन भएको छ । बारा र पर्साबाट हजारौंको सङ्ख्यामा आएको जनताले आज नगर क्षेत्रको विभिन्न ठाउँबाट निकालेको लाठी जुलुस घण्टाघरमा एकत्रित भई मितेरी पुलमा पुगेका थिए । वीरगंजको पावरहाउस, लक्ष्मणवा, नगवा चोकबाट निस्केको बाजागाजासहित नाचगान गर्दै मितेरी पुल पुगेको थियो । बाराको कलैया, गंजभवानीपुर, इनर्वासिरा, बरियारपुर, पचरौताबाट आएको जुलुस नगर परिक्रमा गर्दै मितेरी पुलमा पुगेको थियो । बाजागाजासहित निकालिएको लाठी जुलुसमा मोर्चाका कार्यकर्ताहरूले अभी नहीं तो कभी नहीं भन्ने नारासहित जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेता सभासद् लालबाबु राउत गद्दी, केन्द्रीय सदस्य निजामुद्दीन समानी, जिल्ला अध्यक्ष प्रदीप यादव, नन्दन यादवलगायतले आज प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका थिए । प्रस, रौतहट, १५ पुस/ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा रौतहटद्वारा आज विशाल लाठी जुलुस प्रदर्शन भएको छ । मधेसी क्रान्ति चोकदेखि शुरु भएको लाठी जुलुस नगर परिक्रमा गर्दै सदरमुकाम गौरको विभिन्न क्षेत्र
नेपालमा नर्सिङ पेशाको दयनीय अवस्था
– नुनुता राई नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको तथ्याड्ढ अनुसार नेपालमा हाल ५८ हजार आठ सय नर्स छन् । यो सङ्ख्या बर्सेनि ५ हजारका दरले थपिन्छ । रोजगारको सिलसिलामा ३० हजार नर्स देश बाहिर छन् । स्टाफ नर्स पढ्नको लागि निजीमा पाँच लाखभन्दा बढी शुल्क मात्र लाग्दछ भने सरकारी कोटामा पढ्नेले पनि झन्डै तीन लाख जति खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । खाना र बसाइको जोड्दा नर्सिङ पढ्न निकै महँगो छ । पहिलेजस्तो नर्सिङ पढेकाले सजिलै जागिर पाइन्छ भन्ने अवस्था अब रहेन । कम पारिश्रमिकमा रातदिन काम गर्ने नर्सको जीवन धेरै समस्यामा अल्झिने गर्दछ । अस्पतालमा बिरामीको उपचारमा नर्सको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर नर्सलाई सुविधा र सम्मान दुवै नभएको नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनकी अध्यक्ष तारा पोखरेल बताउँछिन् । सरकारले नर्स बिरामीको अनुपात अनुसार अस्पतालमा लागू नगर्दा लाखौ खर्च गरेर नर्स पढ्नेहरू बेरोजगारी छन् । नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल दरबन्दी कायम गर्दा २५ वटा बेडदेखि १ हजारवटा बेड क्षमता भएको अस्पतालले कति नर्स राख्नुपर्छ भनेर निर्देशिका बनाएको छ । उक्त निर्देशिका अनुसार आइसियुमा एक बिरामीको लागि एक नर्स, अ
आशाका किरणहरू समाजमा देखिंदैनन् त ?
सञ्जय साह मित्र समाज अहिले निराशाको गम्भीर खाडलमा पुरिएको अनुभव भइरहेको छ । निराशाले नेपालभरिलाई एक वर्ष पहिले तराईमा देखिएको कुहिरोलेजस्तै सूर्य नदेखिने गरी छोपेको छ । कुहिरो त यति बाक्लो छ कि सूर्य नदेखिने किसिमको निराशा सबैतिर व्याप्त हुन थालेको छ । सूर्यको प्रकाशले धरती उज्यालो त देखिन्छ तर मानिसको मनभित्र भने उज्यालो देखिएको पाइँदैन । मानिसको मन उज्यालो नभएपछि संसार सारा अँध्यारो नै लाग्छ । आफ्नो आँगन अँध्यारो भएको बेला पूरै पृथ्वी जतिसुकै झलमल्ल उज्यालो हुँदा पनि आफ्नो अनुहारमा भने उज्यालो आएको हुँदैन । अरूको अनुहारको उज्यालोलाई आफ्नो अनुहारमा बसाइँ सार्न नसकिने रहेछ । अरूको उज्यालो आफूलाई काम पनि नलाग्ने रहेछ । अहिले नेपाली विभिन्न देशमा रोगजारको लागि जाने क्रम मात्र बढेको छैन, रोजगारको लागि हुने आशाको दीपसमेत मधुरो भएर गएको छ । मधुरो दीपले मनभित्रको सबै अँध्यारोलाई नहटाउने हुनाले बाहिर भने उज्यालोको खोजी गर्न थालेका छन् । केही पछिल्ला तथ्याड्ढहरूले देशको निकै धेरै क्षेत्रमा निराशा बढेको देखाएको छ । देशको शिक्षा क्षेत्रले पनि निकै धेरै रकम विदेश पठाएको छ अर्थात् उच्च
वैकल्पिक ऊर्जाको खोजी किन ?
भोजपुरीको एउटा उखान छ–भइल लइका मरमर जाये ढिँड के ओझाइ । जन्मेको सन्तानको स्याहारसुसार नगर्दा मरेर जाने, गर्भमा रहेको बच्चाको भने उपचार र चिकित्सा । केही यस्तै अवस्था नेपालको छ । यहाँका शासकहरूले नेपालको अपार जलस्रोतको विकास गर्ने हो भने नेपाल ऊर्जाको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर मात्र हुँदैन, दक्षिण एसियामा समृद्ध देश पनि बन्न सक्दछ । यहाँ ऊर्जाको अक्षुण्ण भण्डार छ । ऊर्जाको लागि पृथ्वीमा भएका स्रोतहरूमध्ये दुईवटा स्रोत कहिले नसिद्धिने किसिमका छन् । पानी र घाम (सूर्यको प्रकाश) । सूर्यको तापबाट बिजुली निकाल्ने प्रक्रिया महँगो पर्छ, तर पानीबाट बिजुली निकाल्न सस्तो हुन्छ । सस्तो स्रोतको उपयोग गरिसकेर स्रोत अभाव भयो भने विवेकशील मानिस अर्को विकल्प खोज्नेतिर लाग्छ । तर यहाँ सस्तो स्रोतको उपभोग प्राय: भएकै छैन भने पनि हुने अवस्थामा सरकार चाहिं महँगो र नजानेको प्रविधिको सोलार बत्ती बाल्ने योजनामा लागेको छ । घरमा भएको साधनको उपयोग नगर्ने, बाहिरको महँगो प्रविधि भित्र्याउन खोज्ने सरकारको क्रियाशीलता, जताबाट भए पनि कमिशन खाने दाउ हो भन्न धक मान्नुपर्दैन । सोलार प्रविधिबाट बिजुली बाल्न नेपालीको क्
२०७२ पुस १५ गते बुधवारको प्रतीक दैनिक
पर्सामा पेट्रोलियम पदार्थ वितरण व्यवस्थित हुन सकेन
प्रस, वीरगंज, १४ पुस/ नाकाबन्दीको कारण पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको अभाव भएको बेला वीरगंजमा स्थानीय प्रशासनले दुवै थोकको सहज व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । नेपाल आयल निगम अमलेखगंजमा हालका दिनमा पर्याप्त पेट्रोलियम पदार्थ रहेको र मकवानपुरमा आम जनतालाई समेत ब्लूबूक हेरेर प्रतिव्यक्ति ५ लिटर सातामा पेट्रोल उपलब्ध गराइँदैछ । तर वीरगंजमा भने सङ्घसंस्था, अस्पताल, यातायात व्यवसायीलगायतलाई मात्र कुपनबाट डिजल, पेट्रोल दिने काम भइरहेको छ। यसरी वितरण भएको कुपनमा पनि अनियमितता भइरहेको बेलाबखत गुनासो आउने गरेको छ । खासगरी यातायात व्यवसायीहरूलाई वितरण गरिने कुपनमा अनियमितताको कुरा अहिले पनि भइरहेकै छ । संस्था मात्र दर्ता गरेर तथा बस नभएकै व्यवसायीहरूलाई मिलोमतोमा बढी कुपन दिने गरेको आरोप अहिले पनि यातायात व्यवसायीहरूले लगाएकै छन् । आम जनतालाई पेट्रोल र डिजल उपलब्ध गराउनेतर्फ स्थानीय प्रशासनले अहिलेसम्म कुनै गृहकार्य गरेको छैन । डर, धाक देखाउन सक्ने र पहुँचवालाले स्थानीय प्रशासनबाट पेट्रोलियम पदार्थको कुपन लिएर वीरगंजबाटै आपूर्ति पाइरहेका छन् भने पहुँच नहुनेहरूलाई अमलेखगंज डिपोमार्फत्
कृषकलाई पेट्रोलियम पदार्थ दिने तयारी
प्रस, वीरगंज, १४ पुस/ पर्साका किसानहरूलाई कृषि कार्यमा आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तयारी गरेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीको संयोजनमा आयल निगमका प्रतिनिधि, पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी सङ्घ, कृषक महासङ्घ, जिल्ला कृषि कार्यालय र कृषि सहकारीका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित, म·लवार जिल्ला प्रशासनमा बसेको बैठकले किसानलाई आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । सो निर्णय अनुसार जिल्लामा नगर क्षेत्र, डकैला बहुअरी र पोखरिया नगरपालिकामा एक–एक वटा पम्पबाट कुपनको आधारमा कृषि कार्यका लागि डिजल वितरण गरिने छ । उक्त डिजेल प्रहरीले सुरक्षा दिएर सम्बन्धित पेट्रोल पम्पसँग पुर्‍याइदिने निर्णय भएको छ । उखु क्रसि·को समय भइसक्दा पनि डिजेल तथा पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा किसानले उखु चिनी मिलसम्म पुर्‍याउन नसक्दा सृजित समस्यालाई मध्यनजर गरी बैठक बसेको सहभागीहरूले बताएका छन् ।
तनाव व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण
ई. गोपाल श्रेष्ठ आजको व्यवसायिक युगमा प्राय: सबै मानिस तनावमा नै हुन्छन् । ‘तनाव’ शब्द मानव शरीरको महत्त्वपूर्ण अ·हरू ‘स्नायु र मस्तिष्क प्रणाली’ सँग सीधा सम्बन्धित हुन्छ । तनाव व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा सौहार्दपूर्ण पारिवारिक वातावरणको लागि डरलाग्दो र ध्वंसात्मक हुन्छ । हाम्रो आवश्यकता तथा आकाङ्क्षाको अनुपातमा हाम्रो स्रोत तथा साधन सीमित हुन्छ । आवश्यकता तथा आकाङ्क्षा पूरा गर्न सकिएन भने हामीलाई तनावले आक्रमण गर्छ । तनावले मानिसको रक्तचाप बढाउँछ । बढ्दो रक्तचापले मानिसलाई ‘ब्रेन हेमरेज’ तथा ‘प्यारालाइसिस’ पनि गर्न सक्छ, तनावले निम्त्याउने रोगमध्ये मुटु र मृगौला रोग त सामान्य नै हो । मानिस मानिसबीच पारिस्परिक सम्बन्धमा एकले अर्कोलाई नबुझेर दुव्र्यवहार गर्‍यो भने पनि तनाव सृजना हुन्छ । दुव्र्यवहारले मानिसको आत्म–सम्मानमा चोट पुग्छ र यो चोटले मानिसको हृदय छिया–छिया पारिदिन्छ । हृदय छियाछिया हुनु भनेको तनाव सृजना हुनु हो । मानिसको कार्यस्थलमा सधैं न्यायोचित काम भइरहेको हुँदैन । अन्यायपूर्ण कामले पनि तनाव सृजना गर्छ । अन्याय जति ठूलो हुन्छ, आक्रोश पनि त्यत्ति नै डरलाग्दो हुन्छ । तन
श्रीमन्नारायण प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुर ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पौराणिक कारणले महत्त्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध तीर्थस्थलको रूपमा रहिआएको छ । प्राचीन मिथिलाको अधिकांश भूभाग वर्तमानमा भारतको बिहार राज्य अन्तर्गत पर्दछ । राजधानी जनकपुर तथा झन्डै पूर्वी मधेस अवश्य पनि नेपालमा पर्दछ । झन्डै ५ महिनादेखि तराई मधेसमा जारी आन्दोलनका कारण त यो चर्चामा थियो नै, राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको जनकपुर भ्रमणका दौरान भएको घटनाले यो थप चर्चामा आएको छ । नेपालका नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको जनकपुर भ्रमण विशुद्धरूपमा निजी तथा धार्मिक थियो । यस दरम्यान कुनै सरकारी कार्यक्रम नहुनु वा हुन नसक्नुले पनि साबित गर्दछ कि यो भ्रमण धार्मिक नै थियो । राष्ट्रपतिको उपस्थिति मन्दिर परिसरमा रहेको बेला भएका घटनाहरूलाई कुनै पनि अर्थ अथवा बहानामा जायज ठहर्‍याउन सकिंदैन । कुनै पनि व्यक्तिको निजी आस्थाको विषयलाई विवादमा ल्याउनु उचित हुँदैन । संविधानत: धर्मनिरपेक्ष घोषित भइसकेको देशमा राष्ट्रपति जुनकि संविधानका संरक्षक एवं अभिभावक पनि मानिन्छन्, ले एउटा खास धर्मको कार्यक्रममा बढी मात्रामा सहभागिता जनाउनु उचित हुन्छ वा हुँदैन
बढ्दो छ लोडसेडिङ
नेपालमा शासकहरू आफ्नो भनाइप्रति कहिले पनि जिम्मेवार रहेनन् । त्यसै क्रममा हाल बहालवाला प्रधानमन्त्री ओली पनि आफ्नो भनाइमा दृढ रहन्छन् भनी सोच्नु अस्वाभाविक हुन्छ । यहाँ शासकहरूले जे भन्छन्, त्यो कहिल्यै हुँदैन वा नगर्नका लागि नै उनीहरू भन्छन् भनी सोच्नु बरु स्वाभाविक हुन्छ । शासकहरू सन्त–त्यागी होऊन्, शक्तिसम्पन्न राजा–महाराजा होऊन् वा आफ्नो क्षेत्रको दिग्गज–विशेषज्ञ नै किन नहोऊन्, सत्तामा बस्ने बित्तिकै के बित्पात पर्छ, बेइमान बनिदिन्छन् । राजा–महाराजाका पालामा देशलाई सि·ापुर बनाउने कुरा उठाइयो, देश झन्झन् रसातलतिर पुग्यो । राजापछि प्रजातन्त्र आयो सन्त नेताले खानेपानीको त के कुरा काठमाडौंको सडकसम्म पानीले पखाल्ने कुरा उठाए, आज मेलम्ची दुई दशक भइसक्यो अधूरो छ । सानासाना भूरेटाकुरे मन्त्रीहरूले के भने त्यो कुरै नगरौं, अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षभित्र देशमा लोडसेडिङ रहने छैन भन्ने कुरा उनको मुखबाट झर्न पनि पाएको छैन, दुईपटक लोडसेडिङको तालिका फेरिइसक्यो । लोडसेडिङ कम गर्न होइन, वृद्धि गर्न । काम गर्नु पुरुषार्थ हो, काम गर्नमा सन्तोष छ, काम गरेपछि जनताले पत्याउँछ भन्ने सामान्
२०७२ पुस १४ गते मङ्गलवारको प्रतीक दैनिक
पहुँच र पैसावालको काम बन्दले पनि रोकिएन
प्रस, वीरगंज, १३ पुस/ जारी मधेस आन्दोलनको कारण आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएर विभिन्न निजामती कर्मचारी स·ठनहरूले पर्सा जिल्लाको सरकारी कार्यालयहरू बन्द गरे पनि पछिल्लो दिनमा लामो समयसम्म आन्दोलन जारी रहेपछि केही कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ । पर्सा जिल्लामा करिब ६० वटा सरकारी कार्यालय छन् । जारी मधेस आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएर तथा मोर्चाका कार्यकर्ताहरूको डर, धाकधम्कीको कारण केही कार्यालयबाहेक सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूको कामकाज ठप्प थियो । साउन २९ गतेदेखि शुरु भएको अनिश्चितकालीन आमहडताल हालका दिनमा गएर मधेस आन्दोलनमा परिणत भएपछि लामो समयसम्म बन्द खुल्न सकेको छैन । माग सम्बोधन नहुन्जेल बन्द खुल्ने सम्भावना नभएपछि करिब साढे चार महिना लामो बन्दबाट आजित भएका सरकारी कार्यालयहरू विगत केही समयदेखि सञ्चालनमा आएको छ । अत्यावश्यक काम र आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार हुने कार्यहरू सञ्चालन भएपछि त्यसतर्फ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले अनुगमन शुरु गरेको छ । प्रत्यक्षत: बन्द देखाएर भित्रभित्रै काम भइरहेको केही कार्यालयहरूको गतिविधि शड्ढास्पद भएपछि जिल्ला प्रशास
आन्दोलन मोर्चाहरूबीच कार्यगत एकता
प्रस, वीरगंज, १३ पुस/ सङ्घीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सङ्घीय मधेसी मोर्चाबीच आज कार्यगत एकता भएको छ । वीरगंजमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मोर्चाले अहिलेको आवश्यकता कार्यगत एकता नै रहेको बताएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सङ्घीय मधेसी मोर्चाका संयोजक नन्दन यादवले मधेसीको माग दिलाउन सरकारसँग लामो समयदेखि फरक–फरक ढ·ले आन्दोलन गर्दै आएकोमा राज्यले परिवर्तन गरेको विचार र नीति अनुरूप आफूहरूबीच कार्यगत एकता भएको बताए । जुन मोर्चा जहाँ पनि मधेसीको लागि नै लड्ने भएकोले अब चाँडै एउटा महागठबन्धन बनाउने आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका संयोजक पुरुषोत्तम झाले विगत केही दिनदेखि आन्दोलनमा रहेका अन्य मोर्चासँग पनि कार्यगत एकताको कुरा उठाएको र त्यो चाँडै सम्भव हुने बताए । केन्द्रमा एकता नभए पनि जिल्लामा आवश्यक देखिएकोले एकता गर्न खोजिएको उनले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा यादवले सङ्घीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सङ्घीय मधेसी मोर्चाबीच ६ बुँदे सहमतिसमेत भएको बताए । सहमति अनुसार कुनै पनि कार्यक्रममा एकअर्कालाई समान स्थान दिने
राष्ट्रपतिको जनकपुर भ्रमण र मधेसको अर्थ राजनीति
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव वर्तमान राष्ट्रपतिको त्यस पदमा पुग्नु अघिको भूमिका र अभिव्यक्ति मधेसमैत्री थिएन । तर राष्ट्रपति बनेपछि मधेसको पक्षमा बोल्न नसके पनि एमालेका अन्य नेताहरूजस्तै उत्तेजक कुरा गरेकी छैनन् । हिमाल, पहाड, तराईलगायत समग्र जनताको अभिभावकको हैसियतले पूर्व राष्ट्रपतिजस्तै तटस्थ र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न प्रयासरत रहेको बुझिन्छ । जुन सराहनीय छ । पाँच महिनादेखि जारी आन्दोलनलाई सरकारले लाञ्छना लगाउनेबाहेक अभिभावकको कुनै भूमिका निर्वाह गरेको छैन । मधेसमा राज्यविहीनताको अवस्था सिर्जना गरेको कारण पनि मधेसको आक्रोश बढेको हो । अभिभावकविहीनताको पीडा चिर्न हेतु पनि विवाहपञ्चमीमा राष्ट्रपतिको भ्रमणको निर्णय उचित थियो । मधेसको वर्तमान पीडा सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुग्ने एउटा अवसर पनि थियो । धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय रूपमा जनकपुर वीरगंजपछि मधेसको दोस्रो आर्थिक स्रोतयुक्त स्थल हो । विवाह पञ्चमीमा राष्ट्रपतिको भ्रमणले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने र जनकपुरको विकासका लागि राज्यलाई बाध्य पार्ने एउटा माध्यम पनि थियो । तर जनकपुरको दुर्भाग्य भनौं पटकपटक जनकपुरसँग अन्
वर्गीय मुद्दा खोइ ?
कुनै पनि मुलुकको विकास तथा उ्रन्नतिको लागि त्यहाँको समग्र क्षेत्र, जातजाति, लि·, वर्ग र समुदायको विकास जरुरी हुन्छ । एउटा मात्रै अ·को विकासले मानव शरीरविकृत देखिएजस्तै जुन मुलुकमा केही जातजाति, क्षेत्र, वर्ग वा समुदायको मात्र विकास हुन्छ, त्यहाँ विकृति पैदा हुन्छ । विकास भएका र नभएकाबीचको खाडल बढ्दै जाँदा द्वन्द्व हुने हो । द्वन्द्वलाई समयमा सहजरूपमा समाधान गर्न नसक्दा विकृति जन्मने वातावरण बन्छ । मुलुकमा विभिन्न समयमा भइरहेका विद्रोह तथा आन्दोलनहरू द्वन्द्वकै परिणाम हुन् । राणा विरोधी आन्दोलन तथा विद्रोहदेखि जारी मधेस आन्दोलन समेत यसका उदाहरण हुन् । माओवादी युद्ध पनि समानता र विकासको ४० बुँदे मागबाट शुरु भएको थियो । त्यसलाई समयमा निकास दिन नसक्दा देश ११ वर्ष सड्ढटग्रस्त बन्यो । सो अवधिमा भूमिगत युद्धको लक्ष्यविपरीत धेरै विकृतिहरू जन्मने मौका पाए । त्यस विकृतिले विद्रोहरत पक्ष, सत्ता, समाज तथा मुलुकलाई नै ठूलो क्षति पुर्‍यायो । राणा विरोधी विद्रोह पनि लम्बिंदै जाँदा विकृतिहरू देखा पर्न थालेका थिए । आन्दोलन, सङ्घर्ष तथा विद्रोह लम्बिदै जाँदा लक्ष्यविपरीत लुट–खसोट, पूर्वाग्रह, प्रत
२०७२ पुस १३ गते सोमवारको प्रतीक दैनिक
नाउक्षे अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालनको तयारी
प्रस, वीरगंज, १२ पुस/ नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगंजले सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्दै फार्मेसी सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रसूतिगृह भवनको पुरानो प्रवेशद्वार हाल प्रतीक्षालय बनाइएको स्थानमा फार्मेसी सञ्चालन गर्ने योजना रहेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । ५० शैय्याभन्दा बढीको अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेपछि सो निर्णय कार्यान्वयन गर्दै नाउक्षे अस्पतालले फार्मेसी सञ्चालन गर्न लागेको हो । नाउक्षेअमा फार्मेसी सञ्चालनको लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले एकजना फार्मेसिस्टलाई नियुक्त गरी दरबन्दीमा खटाइसकेको छ । तीन महिनाअगाडि महिला फार्मेसिस्ट नियुक्त भएर आए पनि अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी नभएको कारण विभागले पठाएको फार्मेसिस्टले काम नपाएर बस्नुपरेको छ । यसअघि अस्पताल विकास समितिले फार्मेसी सञ्चालन गर्न लागेको भन्दै नाउक्षे अस्पताल कर्मचारी युनियनले विरोध गरेको थियो । युनियनका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद कुर्मीले भने फार्मेसी सञ्चालनको लागि आफूहरूले कहिल्यै विरोध नगरेको बताएका छन् । उनले अस्पताल विकास समितिले फार्मेसी, एनआईसीयूलगायतका
मोर्चाद्वारा भैंसीलाई ज्ञापनपत्र
प्रस, वीरगंज, १२ पुस/ सङ्घीय समावेशी मधेसी गठबन्धन, पर्साले आइतवार वीरगंजमा भैंसी जुलुस निकालेको छ । वर्तमान सरकारले मधेसीसँग भैंसीजस्तो एकोहोरो व्यवहार गरिरहेको भन्दै केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अनुसार गठबन्धन पर्साले भैंसी जुलुस प्रदर्शन गरेको मोर्चाका नेता शिव पटेलले बताए । घण्टाघरबाट शुरू भएको भैंसी जुलुस नगरपरिक्रमा गर्दै पुन: घण्टाघरमा आएर भेसीलाई ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । सो अवसरमा नेता शिव पटेलले मोर्चाले आफ्नो समस्या तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन विगत चार महिनादेखि लगातार आन्दोलन गर्दै आइरहेको तर सरकारले हालसम्म बुझ्न नसकेको कारण आफूहरूले बर्तमान सरकारलाई भैंसीको संज्ञा दिएको बताए । वार्ताको नाममा नेताहरूलाई बोलाउने र एकोहोरो सुनेर सरकार भाग्ने गरेको नेता पटेलके आरोप थियो । सिकेन्द्र पासवान, कलैया/ संघीय मधेसी गठबन्धन बाराले कलैयामा आईतबार भैसी जुलुस निकालीसरकारको बिरोध गरेका छन् । सरकार र बिक्षपी काग््रेस सहितका नेताहरुले भैसी जस्तो तराई मधेसको माग नसुनेको जस्तो गरेका कारण साँकेतिक रुपमा भैसी जुलुस निकालीएको हो । हाम्रो अवाज ती नेताहरु कहा प
विशेषज्ञ बिनाको मेडिकल कलेज
– प्रा.डा. शम्भु प्रसाद पटेल चिकित्सा क्षेत्रमा अचेल ‘खडेबाबा’ भन्ने शब्दको व्यापक चर्चा भएको पाइन्छ जुन फर्जी, नक्कली र मुकुण्डोधारी शिक्षकको पर्यायवाची बनेको छ । डा. गोविन्द केसीको मेडिकल आन्दोलन पश्चात् उत्पन्न खडेबाबाबारे बहस चलिरहँदा देशले उनीहरूबारे विस्तृत विश्लेषण खोजेको छ । उपाधि एक विषयमा र प्राध्यापन अर्को विषयमा गर्ने शिक्षकलाई अलराउन्डर वा खडेबाबाको दर्जा दिने हो भने अपवाद बाहेक धेरै कलेजहरूमा अलराउन्डर वा खडेबाबाहरूको बिगबिगी छ । प्राय:जसो मेडिकल कलेजहरूमा विशेषज्ञहरूको अभाव छ । यहाँ बायोस्टाटिस्टिक्स विषयका खडेबाबाहरूबारे मात्र चर्चा गरिएको छ । बायोस्टाटिस्टिक्स एक आधारभूत विज्ञान हो जुन चिकित्साशास्त्रको एमबिबिएस, बिडिएस, बिफार्मेसी, बिपिएच., बिएस्सी नर्सिङ, एमपिएच., एमएन. आदि कार्यक्रममा अनिवार्य विषयको रूपमा पठनपाठन गराइन्छ । चिकित्साशास्त्रमा गरिने अनुसन्धान र सो विषयको विकास विस्तारमा बायोस्टाटिस्टिक्सको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । आधुनिक चिकित्साशास्त्र गफमा आधारित विज्ञान होइन, यो ज्ञान, धारणा, सीप, अभ्यास र आचारसंहिताले भरिपूर्ण तथ्यमा आधारित विज्ञान हो ।
प्रतिकूल परिस्थितिबाट प्रभावित विद्यार्थीहरू
अनन्तकुमार लाल दास प्रत्येक शिक्षकले यस्तो कक्षाको कल्पना गर्छ जसमा विद्यार्थीहरू प्रसन्न, सक्रिय, जिज्ञासु, सतर्क, ज्ञान प्राप्त गर्न उत्सुक, कल्पनाशील, सृजनशील, आफ्नो भावना अभिव्यक्त गर्न सक्षम, कार्यमा नियमित, बूढापाका वा साथीहरूसँग मिलनसार होस् । मैले कक्षाकोठामा के अनुभव गरेको छु भने केटाकेटीहरू धेरै कुरामा समान हुन्छन् तर उनीहरूबीच एक आपसमा अन्तर पनि हुन्छ । उनीहरू द्वारा गरिने अनुक्रियामा अन्तर देखापर्छ र एउटै केटा वा केटी बेग्लाबेग्लै समयमा भिन्न–भिन्न अनुक्रिया गर्दछन् । उदाहरणका लागि केही विद्यार्थीलाई नजिकबाट अवलोकन गर्नुहोस् । नरेश शारीरिक रूपले कमजोर छ, कक्षामा सतर्क भई बस्दैन र सक्रिय पनि छैन । सात वर्षकी रीना आफ्नो कक्षामा राम्री थिइन् तर हिजोआज उदास रहन्छिन् । उनी एकोहोरो अरूलाई हेरिराखेकी हुन्छिन् र प्राय: आफ्नै कल्पनामा डुबी रहन्छिन् । रमेश र कमली दुवै पढाइमा कमजोर छन् । यी दुवैलाई के भएको छ ? के यिनीहरू मन्दबुद्धिका हुन् ? होइन, यिनीहरूमध्ये प्रत्येकको व्यवहारमा भिन्नता छ । किशोरको समस्या हो–भोक । किशोरलाई खानको लागि पर्याप्त भोजन पाइँदैन । बढी भोको भएको हु
आन्दोलन चालू छ
‘लाठी फाठा लेके होख तैयार, नेपाल अभी बन्दे बा’ मधेसको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला रचिएको र रातदिन घन्कने गरेको यो भोजपुरी गीत बीचमा सेलाएको थियो । आन्दोलनलाई उठान दिन आन्दोलनकारीहरू जुर्मुराउँछन् तर दशैं, तिहार, छठ र बाली भित्र्याउने, गहुँ छर्ने, सिंचाइ गर्ने बेला परेको, जाडोले मुटुसम्म चिस्याउन थाल्दा र नाकामा कैयौंपटक तस्कर, ट्रक चालकहरूको मार सहँदा हताश हुन्छन् । हुनत हताशा आन्दोलनमा सहभागी नेताहरूले, केहीले त घोषितरूपमैं संविधानसभा–व्यवस्थापिका संसद् नै छोडिसकेको भए तापनि, संविधान जारी भइसकेको अवस्था र त्यसै संविधानको प्रति जलाए तापनि, सरकार बनाउने खेलमा सहभागी भएर आन्दोलनको तेजमा खरानी छर्ने काम गरेकोले फेरि धर्मराउन थाल्छन् । पछिल्लोपटक दिल्ली दौडाहाबाट फर्केपछि आन्दोलनले उठान लिन नसकेको चाहिं प्रस्ट हो । यद्यपि यस अवधिमा पनि मधेसी जनताले ज्यान (रौतहटमा) दिएकै हो । अब रेकर्डमा बज्ने ‘लाठी फाठा...’ले पनि आन्दोलनलाई उकास्न नसकेको देखिन थालेको छ । नेता लोभीपापी भयो भने कार्यकर्ता वा अनुसरणकर्ताको नैतिक शक्ति च्युत हुन्छ । आज देखिएको परिदृश्य त्यस्तै छ । मधेस आन्दोलनको रापल